Azalea ee 2015
Amethyst Amelia Kelly Azalea
(1990-06-07) 7 Juun 1990 ( 31jir)
Mercury, Island Def Jam (saat ini)
Grand Hustle (mantan)
Amethyst Amelia Kelly (waxay dhalatay 7 Juun 1990), oo si fiican loogu yaqaanay magaceeda Iggy Azalea (/ əˈzeɪliə /), waa fanaanad Australiyaanka ah, in loo tago dalka Mareykanka si uu xirfad ugu yeesho miyuusigga. Azalea waxay heshay aqoonsi guud ka dib markii ay sii daayay fiidiyowyada muusikada heesaheeda "Pussy" iyo "Two Times" ee YouTube-ka. Azalea waxay la saxiixday heshiis duubis ah oo Mareykan ah T.I. oo loogu magac daray Grand Hustle waxyar ka dib waxayna sii deysay Ignorant Art (2011).
Albamka ugu horeyay ee Azalea, The New Classic (2014), meesha ugu saraysa ayaa lagu guulaystay aduunka oo dhan. The New Classic waxaa ka horeeyay heesta "Work" iyo "Fancy". Azalea waxaa lagu soo bandhigay heesta Ariana Grande "Problem".
Albamkeedii ugu horreeyay ka dib, Azalea waxay sii deysay tiro keli ah si ay u dhisto rajada albamka labaad ee loogu talagalay, Digital Distortion. Si kastaba ha ahaatee, isku dhacyo isdaba joog ah oo la socday calaamadeeda, iyo sidoo kale isku dhacyo shaqsiyadeed, ayaa sababay in mashruuca la joojiyo. Sidaa darteed, Azalea waxay beddeshay sumadaha, waxayna sii daysay Survive the Summer (2018) ee hoos yimaada Island Records. Khilaafaadyo dheeraad ah ayaa horseeday in Azalea ay noqoto farshaxan madaxbannaan oo abuurto calaamadeeda, Bad Dreams, iyada oo loo marayo heshiis qaybinta Empire. Albamaheedii labaad, In My Defence, waxaa la sii daayay 2019, waxaa ku xigay EP kale, Wicked Lips, isla sanadkaas. Kahor intaysan joojin muusiga, Azalea waxay siidaysay albamkeedii seddexaad iyo kii u dambeeyay ee istuudiyaha, The End of an Era, Ogosto 2021.
Tan iyo markii ay bilawday, Azalea waxay iibisay 70 milyan oo rikoodh oo adduunka ah, iyada oo 22 milyan oo kali ah ay ku sugan yihiin Maraykanka oo keliya. Kanaalka rasmiga ah ee Azalea ee YouTube waxa uu urursaday 3.4 bilyan oo daawasho, iyadoo 15 muusik muuqaal ah laga helay in ka badan 100 milyan oo daawasho ee Vevo.
Albumyasha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
End of an Era (2020)
↑ "Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original 2019-10-13. Soo qaatay 2022-03-01. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Iggy_Azalea&oldid=235268"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 May 2022, marka ee eheed 20:58.